FJKM Avaratr'Andohalo, VK 52 Anjohy, Antananarivo (2019)
Home > Madagascar > Antananarivo > Places Of Worship > FJKM Avaratr'Andohalo
"Fahamasinana no mendrika ny tranonao mandritra ny andro maro, Jehovah ô." (Salamo 93:5b) "He, Ry Avaratr'Andohalo, Fiangonanay malala, sarotra afoy, sarotra adinoina fa hiorenan'ny fo sy ny saina..." Mpiangona ao amin'ny FJKM Avaratr'Andohalo ianao ? Zanak'Avaratr'Andohalo any am-pielezana ? sa sendra mandalo fotsiny ? Raiso isanandro ato ny Mofon'Aina FJKM izay nalaina tao amin'ny tranonkalan'ny FJKM: www.fjkm.mg Zarao amintsika rehetra ihany koa ny sary, na raki-tsary, na hevitra hitanao fa mety mahasoa antsika rehetra ka ahafahana mampandroso ny Fanjakan'Andriamanitra.
Mission: Fitoriana ny Tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fampiasàna ny fitaovana maoderina, ahafahana mahakasika olona maro.
Alatsinainy 20 mey 2019
MANÀNA FAHAMARINANA EO ANATREHAN'NY TOMPO
Alahady 19 mey 2019
fa efa tonga maizin-tsaina sy olon-ko azy amin'ny fiainan'Andriamanitra ireny noho ny tsi-fahalalana ny anatiny, noho ny hamafin'ny fony,
Fa ianareo kosa, dia tsy mba toy izany no nianaranareo an'i Kristy,
raha Izy tokoa no renareo ka tao aminy no nampianarana anareo, araka ny fahamarinana izay ao amin'i Jesosy,
mba hialanareo ny toetrareo taloha araka ny fitondran-tenanareo fahiny, izay mihasimba araka ny filan'ny fitaka;
fa mba hohavaozina kosa ianareo amin'ny fanahin'ny sainareo,
Sabotsy 18 mey 2019
Zoma 17 mey 2019
3 Jaona 1:1-8
Izaho loholona mamangy an'i Galo, ilay malala, izay tiako amin'ny fahamarinana.
izay nanambara ny fitiavanao teo anatrehan'ny fiangonana; dia ho soa no ataonao, raha mamoaka azy koa araka izay miendrika hatao noho ny amin'Andriamanitra ianao;
Alakamisy 16 mey 2019
Anaka, tandremo ny teniko; Atongilano ny sofinao hihaino ny filazako.
Aza avela hiala eo imasonao izy, Fa raketo ao am-ponao.
Fa aina ho an'ny mahazo azy izy Ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra.
Tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony hotandremana; Fa avy ao aminy no ihavian'ny aina.
Esory aminao ny vava mandainga, Ary ampanalaviro anao ny molotra mamitaka.
Aoka ny masonao hijery mahitsy, Ary ny hodimasonao hibanjina eo anoloanao.
Ataovy marina ny alehan'ny tongotrao, Dia ho voalamina ny alehanao rehetra;
Aza mivily, na ho amin'ny ankavanana, na ho amin'ny ankavia; Esory amin'ny ratsy ny tongotrao.
Alarobia 15 mey 2019
Ary izao no tantaran'i Noa: Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona niara-belona taminy; eny, niara-nandeha tamin'Andriamanitra Noa.
Ary Noa niteraka zanaka telo mirahalahy , dia Sema sy Hama ary Jafeta.
Ary simba ny tany teo anatrehan'Andriamanitra sady heni-doza;
dia hitan'Andriamanitra ny tany, ka, indro, efa simba izy; fa ny nofo rehetra samy efa nanimba ny lalany avy tambonin'ny tany.
Dia hoy Andriamanitra tamin'i Noa: Ny faran'ny nofo rehetra efa mby eto anatrehako, satria efa heni-doza ny tany noho ny amin'olona, ka, indro, efa handringana azy mbamin'ny tany Aho.
Koa manaova sambo-fiara ho anao amin'ny hazo gofera; ary hasianao efitrefitra ny sambo-fiara, ka hopetahanao dity ao anatiny sy eo ivelany izy.
Ary toy izao no hanaovanao azy: hakiho telon-jato ny lavan'ny sambo-fiara, hakiho dimam-polo ny sakany, ary hakiho telo-polo ny hahavony.
Ary hasianao fidiran'ny mazava ny sambo-fiara, ary amin'ny hakiho iray no hahavitanao azy hatreo ambony; ary hasianao varavarana ny rindrin'ny sambo-fiara ; hataonao efitra telo mifanongoa izy.
Ary, indro, Izaho efa hahatonga ny safo-drano ambonin'ny tany handringana ny nofo rehetra izay manam-nofonaina ambanin'ny lanitra; dia ho faty izay rehetra eo amin'ny tany.
Nefa kosa haoriko ny fanekeko aminao; ary hiditra ao anatin'ny sambo-fiara ianao sy ny vadinao aman-janakao mbamin'ny vinantonao vavy miaraka aminao.
Ary ny zava-manan'aina rehetra, dia ny nofo rehetra, hitondranao roa avy isan-karazany ho ao anatin'ny sambo-fiara, hovelomina miaraka aminao; ho lahy sy vavy avy ireo.
Talata 14 mey 2019
Indro, izaho Paoly milaza aminareo fa raha mety hoforana ianareo, dia tsy hahasoa anareo na dia kely akory aza Kristy.
Fa izahay amin'ny Fanahy sy noho ny finoana dia miandry ny fanantenana ny fahamarinana.
Hisy ny fandalinana Soratra Masina ny alarobia 15 may 2019 ho avy izao, manomboka amin'ny 12ora atoandro ao am-piangonana koa andeha hanararaotra izany isika.
"Manamasìna azy amin'ny fahamarinana ; ny teninao no fahamarinana" Jao. 17, 17.
Alatsinainy 13 mey 2019
Izao no lazain'i Jehovah: Tandremo ny rariny, ary manaova ny marina, fa efa madiva ho tonga ny famonjeko, ary efa hiseho ny fahamarinako.
Sambatra ny zanak'olombelona izay manao izany, ary ny zanak'olona izay mitana izany, dia izay mitandrina ny Sabata ka tsy manao azy ho tsy masina sady miaro ny tanany tsy hanao izay ratsy akory.
Ary aoka ny hafa firenena izay efa manaiky ho an'i Jehovah tsy hanao hoe: Hesorin'i Jehovah tsy ho isan'ny olony tokoa aho; Ary aoka ny ionoka tsy hanao hoe: Indro, hazo maina aho.
Fa izao no lazain'i Jehovah: Ny amin'ny ionoka izay mitandrina ny Sabatako sy mifidy izay sitrako ary mitana ny fanekeko,
Izay mandray anareo dia mandray Ahy; ary izay mandray Ahy dia mandray Izay naniraka Ahy.
Izay mandray mpaminany, satria mpaminany izy, dia handray ny valim-pitian'ny mpaminany; ary izay mandray olona marina, satria olona marina izy, dia handray ny valim-pitian'ny olona marina.
Ary na zovy na zovy no manome rano mangatsiaka na dia eran'ny kapoaka ihany aza hosotroin'ny anankiray amin'ireo madinika ireo, satria mpianatra izy, dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitiany.
Sabotsy 11 mey 2019
Fa ny fiainan-tsi-hita tsy mba mahasaotra Anao, ny fahafatesana tsy mahadera Anao; Fa izay midina any an-davaka dia tsy mahazo manantena ny fahamarinanao.
Zoma 10 mey 2019
2 Korintiana 6:11-18
Tsy tery aminay ianareo, fa tery ao am-ponareo ihany.
Ary mba ho valiny toraka izany (izaho miteny toy ny amin'ny zanako), dia mba mihalalaha kosa ianareo.
Aza mety hasiana zioga tsy antonona anareo hikambanana amin'ny tsy mino. Fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana? Ary inona no iombonana'ny mazava sy ny maizina?
Ary inona no ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy ? Fa isika no tempolin'Andriamanitra velona, araka ny nataon'Andriamanitra hoe: Honina eo aminy sy handeha eo aminy Aho, ary izy ho oloko (Lev. 26. 11, 12).
Koa mivoaha eo aminy ianareo, ka misaraha aminy, hoy Jehovah, Ary aza manendry izay zavatra tsy madio; Ary Izaho handray anareo.
Ary ho Rainareo Aho, ary ianareo ho zanako-lahy sy ho zanako-vavy, hoy Jehovah Tsitoha (Isa. 52. 11, 12).
Alakamisy 9 mey 2019
Izao no lazain'i Jehovah, Tompon'ny maro, Andriamanitry ny Isiraely: Ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo, dia hamponeniko amin'ity tany ity ianareo.
Aza matoky ny teny lainga hoe: Tempolin'i Jehovah, tempolin'i Jehovah, Tempolin'i Jehovah ity.
Fa raha ataonareo tsara mihitsy ny lalanareo sy ny ataonareo, ka mitsara marina ny adin'olona amin'ny namany ianareo,
Ary tsy mampahory ny vahiny sy ny kamboty sy ny mpitondratena, na mandatsaka rà marina amin'ity tany ity, sady tsy manaraka andriamani-kafa hahatonga loza aminareo,
Dia hamponeniko amin'ity tany ity ihany ianareo, dia eto amin'ny tany nomeko ny razanareo, hatramin'ny ela ka ho mandrakizay.
Alarobia 8 Mey 2019
Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao.
Izay mino Azy dia tsy helohina; fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka rahateo, satria tsy nino ny anaran'ny Zanaka-lahy Tokan'Andriamanitra izy.
Ary izao no fanamelohana, fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava, nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava, satria ratsy ny asany.
Fa izay rehetra manao ratsy dia mankahala ny mazava sady tsy manatona ny mazava, fandrao hita miharihary ny asany.
Fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava, mba haseho ny asany, fa atao amin'Andriamanitra izany.
Talata 7 mey 2019
Halako ny mpiroa saina; Fa ny lalànao no tiako.
Fiereko sy ampingako Hianao; Ny teninao no andrasako.
Mialà amiko ianareo mpanao ratsy, Mba hitandremako ny didin'Andriamanitro.
Tohàny aho araka ny teninao, mba ho velona, Ary aoka tsy ho menatra amin'ny fanantenako aho.
Tohàny aho mba ho voavonjy, Ka ho faly hijery ny didinao mandrakariva.
Ataonao tsinontsinona izay rehetra mania amin'ny didinao; Fa famitahan-tena ihany ny laingany.
Efa nataonao fanary tain-drendrika ny ratsy fanahy rehetra amin'ny tany; Izany no itiavako ny teni-vavolombelonao.
Mipararetra ny nofoko ny fahatahorana Anao, Ary matahotra ny fitsaranao aho.
Alatsinainy 6 mey 2019
2 Petera 1:16-21
Fa nahazo laza amam-boninahitra tamin'Andriamanitra Ray Izy, raha tonga teo aminy avy tamin'ny voninahitra lehibe indrindra ilay feo nanao hoe: "Ity no Zanako malalako izay sitrako" (Mat. 17.5).
Ary manana ny teny faminaniana atao mafy orina kokoa isika; koa raha mandinika izany ianareo, dia manao tsara, fa toy ny jiro mahazava ao amin'ny fitoerana maizimaizina izany, mandra-pahazavan'ny andro, ka miposaka ao am-ponareo ny fitarik'andro;
Alahady 5 mey 2019
2 Samoela 22:21-28
Ny madio no isehoanao fa madio; Ary ny mpiolakolaka kosa no isehoanao fa lalin-tsaina.
Sabotsy 4 mey 2019
Koa aza mifampitsara intsony isika; fa aleo mihevitra izao, dia ny tsy hanisy fandavoana na fanafintohinana eo anoloan'ny rahalahy.
Mahalala sady matoky ao amin'i Jesosy Tompo aho fa tsy misy zavatra maloto ho azy; fa raha misy manao zavatra ho maloto, dia aminy ihany no maloto izany.
Fa raha mampalahelo ny rahalahinao ny fihinanao, dia tsy mba manaraka ny fitiavana intsony ianao. Aza ny fihinanao no animbanao azy, fa efa maty Kristy hamonjy azy.
Aoka ary tsy mba hotenenina ratsy ny fahasoavana azonareo.
Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana, fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny Fanahy Masina.
Fa izay manompo an'i Kristy amin'izany zavatra izany no sitrak'Andriamanitra sy eken'ny olona fa tsara.
FIVORIAN’NY MPIANDRAIKITRA FOIBE CFD Ampandrana
(24 Aprily - 01 Mey 2019)
Ny Mpiandraikitra Foibe nivory ara-potoana teto Antananarivo (CFD Ampandrana) tamin’ny 24 Aprily ka hatramin'ny 01 Mey 2019, mamangy ny fianakaviana Kristiana rehetra manerana ny sahan'ny FJKM: “ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesoa Kristy Tompo” (I Kor.1/3). Miarahaba antsika rehetra nahatratra ny Paska.
Misaotra ny Tompo Jesoa, Lohan'ny Fiangonana, fa tanteraka soa amantsara ny fanokafana ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny fahatraran'ny Sekoly Protestanta FJKM ny faha-200 taona nisiany. Ho redonina eo am-panombohana amin’ny fanompoam-pivavahana rehetra ataontsika ny hira fanevan’ity jobily ity mandritra izao taona 2019 izao, toy ny natao tamin'ny faha-200 taona nidiran'ny Misiona LMS sy ny faha-50 taonan'ny FJKM.
Ny hatao tsangambaton’io Jobily io dia ny fananganana ivon-toerana ho an’ny fanomanana Mpampianatra any Imerimandroso Ambatondrazaka. Entanina isika mba hifarimbona amin'izany.
Ampahatsiahivana eto indray fa ny faha-25 taona hatrany no atao hoe JOBILY ary misy fotoam-panokafana sy ivony, ary famaranana.
Ny FANKALAZANA tsingerintaona kosa dia ivelan'izany ary indray maka ihany no anaovana izany: isaky ny 10 taona raha olona, ary azo atao isaky ny 5 taona raha sampana na fikambanana.
Misaotra ny Tompo Jesoa fa nosokafana tao anatin’izao fivorian’ny MF06 ny “Sekoly Doktoraly” (Ecole doctorale) izay ao amin'ny Oniversity Ravelojaona.
Isaorana sy ankasitrahana eto ireo Tale sy Mpampianatra rehetra ao amin'ny Sekoly FJKM fa tena tsara dia tsara indrindra sy miavaka ny vokatr’ireo fanadinana nahazoana diplaoma ara-panjakana tany amin’ny isan’ambaratonga tamin'iny taom-pianarana lasa iny.
Isaorana ny Tompo fa mandroso ny Asa Fitoriana ny Filazantsara koa aoka hojerentsika manokana ny fiahiana ireo olona niova fo sy resilahatra ho kristiana izay mety hiharan’ny fanilikilihana na ny fanenjehana.
Nekena tamin’izao fivoriana izao ny hitambaran’ireo FJKM any Canada amin’ny Synodamparitany 37 Vatofehizoro Ampitan-dranomasina.
Ankasitrahana ny ezaka lehibe fandrotsahana adidy sy fanefana ny kitapo iombonana avy amin’ny synodamparitany rehetra sy ny fiangonana mpanampy isan-tsokajiny.
Momba ny “Facebook” sy ny “Site Web”: Efa manana ny “Kaonty” azy manokana ny FJKM, ka aoka hanontany sy hila hevitra hatrany any amin'ny Tomponandraikitry ny serasera sy ny fifandraisana (AFIFAB) ao amin'ny Foibe FJKM izay manana hetaheta hampiasa izany.
Averina amintsika vahoakan'Andriamanitra eto amin'ny sahan’ny FJKM eto hatrany fa isika Fiangonana FJKM dia tsy manaiky ny fifanambadian'ny lahy samy lahy, na vavy samy vavy, ary araka ny voalazan’ny Soratra Masina (Lev.18/22; Lev20/13/; Rom.1/27; I Kor.6/9, 10; ITim.1/10, 11) sy araka ny Foto-dalàna sy Fitsipika andininy faha-74.
Aoka samy hahatsiaro amim-bavaka ny fanatanterahana ireo Zaikabe sy Fihaonambe ary Fiofanana any amin'ny isan-tokony avy amin’ity taona ity, ary toy izany koa ny SYNODA LEHIBE SLVIX izay hatao any Sambava SP16, KRIFAA ny 12-19 Aogositra 2020.
“Ary Andriamanitry ny fiadanana, Izay nitondra an'I Jesoa Tompontsika, Mpiandry ondry lehibe, hiala amin'ny maty, mitondra ny ràn'ny fanekena mandrakizay, Izy anie hahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo imasony amin'ny alalan'I Jesoa Kristy; ho Azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay Amena.” (Hebreo 13/20, 21).
Natao teto Antananarivo, androany 01 Mey 2019
Ny Filohan'ny F.J.K.M
+261 20 22 240 36
Fifohazana Fjkm Ambodifiakarana Famonjena
Fifaliana ho an'ny mpikambana ao amin'ny SAFIF na Sampana Fifohazana avy ao amin'ny FJKM Ambodifiakarana Famonjena ny mizara ny Soratra Masina ho anao!
Sampana Ambohimanarina LDS
FJKM Antanetibe Fitiavana
Lien de communication entre les groupes charismatiques de Madagascar
FJKM Ambohimanjaka Tranovato Fitiavana